Telefoonnadii ugu horreeyay ee ay la socdaan FirefoxOS oo la iibinayo usbuuca soo socda | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan ku ogaadaa via Mozilla-ga Isbaanishka in todobaadka soo socda mobilada ugu horeeya ee ay isticmaalaan la iibin doono Firefox OS sida Nidaamka Hawlgalka, gacanta ku haya geekphone.
Waxaa lagu iibsan karaa laba nooc, Keon midka hore, oo leh qiime ah 91 Euros + VAT kaas oo leh 3.5 screen HVGA Multitouch screen, 1Ghz Qualcomm S5 Cortex A1 processor, 4GB oo ah ROM + MicroSD, 512MB oo RAM ah, Wifi N, BT, FM Radio, GPS iyo batari 1580 mAh ah.
Kadibna wuxuu yimaadaa Peak oo leh qiime 149 Euros + VAT, oo leh 4.3 ″ qHD IPS Multitouch screen, 4Ghz Qualcomm Snapdragon S1.2 DualCore processor, 4GB of ROM + MicroSD, 512MB of RAM, 8MP camera gadaal + flash, 2MP camera hore, Wifi N, BT, FM Radio , GPS iyo batari 1800 mAh ah.
Labada ikhtiyaarba waxay diiradda saarayaan kuwa horumariya, laakiin haye, haddii aan awoodo, midkood baan iibsan lahaa. Way iska qori karaan boggan si ay ugu wargaliyaan markay iibsan karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Telefoonnadii ugu horreeyay ee wata FirefoxOS ee iibka ah usbuuca soo socda
Halkan bulshada Cuban waxaan ku leenahay nooc horumarineed waana mid aad u wanaagsan, wuxuu ku socdaa zte leh 256 wan oo aad u dheecaan badan iyo sidoo kale codsiyada, naqshad aad u cusub oo fudud ... dhowaan waxaan sameyn doonnaa soo bandhigiddeeda dhammaan bulshada reer Cuban gudaheeda iyo banaanka maxkamada ICU wali waxaan ku mashquulsanahay gggg .. waxaan rajeynaynaa inaan halkaas kuhelno saaxiib ... salaan ka timid firefoxmania ..
Waxaan rajeyneynaa in lagu rakibi karo taleefan kasta oo isticmaala android, sida my Sony Walk with Walkman wt19a
Waxa kaliya ee aqrinayay degel kale ayaa ah in Firefox OS uu yahay mid aad ufiican laakiin waxa aan sifiican u qancin waa labadaan koox ... sida lafilayo agabkii ay isticmaaleen awgood sharaf maleh (ma aqaano hadii taasi micnaheedu tahay wanaag ama waara), laakiin waan jeclahay sida ay u egtahay waan ka helay hehehe
Ma jiraa qof og in lagu rakibi karo Samsung Galaxy Ace
Sababta oo ah sifooyinka nadiifka ah ee qalabka ay taleefannadu leeyihiin oo ka soo jiidan doona asal ahaan, uma maleynayo inay sidaas tahay.
Laakiin yaa ka saara oo haa, sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan ku rakibo LG Optimus Hub oo ah tartanka Galaxy Ace. Marka intaad ordeyso Cyanogen Mod.
Waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan, rajo iyo run inay ahaadaan maxaa yeelay mashaariicda sidan oo kale ah waa kuwa ay tahay inay sii socdaan: D!
Firefox-kan loogu talagalay taleefannada casriga ah, runti ma bilaashbaa?
tan iyo android maahan
haa waa sidaas, runti shirkadaha taleefannada gacanta waxay leeyihiin xorriyad ay wax uga beddelaan si kasta oo ay doonaan (ku dar barnaamijyada, wax ka beddel farshaxanka, iwm), taasi waa sababta ay aad u jeclaadeen
Kaliya waxaan kaa codsanayaa inaad taageerto CPU-yada ARM5 / 6 🙁
Haddii Mozilla aysan badalin caadadeeda, ka hor intaadan iibin Firefox OS waxay ku jiri doontaa nooca 27 beta.
Waxaan jeclaan lahaa inaan awoodo inaan iibsado mid ka mid ah kuwan.
Debian Wheezy ayaa la sii dayn doonaa horaanta bisha May